အထည်အလိပ်ဆိုးဆေးစက် မှအကောင်းဆုံး အထည်အလိပ်ဆိုးဆေးစက် မှထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူ၊
Soft Flow ဆေးဆိုးစက်
ACME MACHINERY INDUSTRY CO., LTD. ၏ကျော်ကြားသောထုတ်လုပ်သူများ, ပစ္စည်းရောင်းသူနှင့်ပို့ကုန်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် အထည်အလိပ်ဆိုးဆေးစက်, အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူ Taiwan. အောင်လိုင်းတွင်အတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာအတူကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်း၌အကြှနျုပျတို့၏ထူးခြားပြောင်မြောက်သောစွမ်းဆောင်မှုကြောင့်လူသိများကြသည်။ ကျနော်တို့အတွက်အဓိကဦးဆောင်အမှတ်တံဆိပ်၏တစ်ဦးအဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ကူညီပေးခဲ့ Taiwan. ကျနော်တို့အဆက်မပြတ်နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များမြှင့်တင်ရန်။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးမြင့်မားနှင့်အတူအချိန်ပေးပို့အပေါ်ထောက်ပံ့သောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, ဖိကိုင်ထားပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ Hard အလုပ်ကျွန်တော်တို့ကိုနိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့အညီကျနော်တို့ရဲ့အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီကူညီပေးခဲ့သည်။
ACME MACHINERY INDUSTRY was established in 1985 in Taiwan. ACME means outstanding, our logo looks likeadragon boat which symbolizes team work, through everyone’s cooperation to drive the boat toapermanent future. By professional technology and practical attitude, we strive to achieve perfect products; taking the business strategy of innovation and change, we try to segment market. Once we launchanew product, we giveadifferent Chinese opera face to symbolize it. During the past years we have developed series of dyeing machines, thousands of our products are running in more than 20 countries and all of products are worldwide patented, users are over the world.
Since our products are advanced design, we also authorized by our government to use the Taiwan Excellence mark which symbolizes excellent made in Taiwan. Especially we won the 1st National Inventor Award, Distinguished Enterprise Innovation Award from Taiwan Ministry of Economic Affairs in recognition of our outstanding performance and dedication to industrial innovation.
As the world faces the shortage of water and energy and serious pollution, ACME has launchedarevolutionary product-AM-ICD Intelligent Conveyer Drive High Pressure Constant Speed Dyeing Machine that highly SAVEs energy and PROTECTs environment, this machine equipped with conveyor to drive the fabrics instead of liquor floating. Therefore, it can save more than 65% of water, steam, electricity, and auxiliary, reduce 65% of wastewater and CO2 emission, no doubt it is the best choice of the dyehouse to target the green economic. The machine isaresult of more than 20 years research and development, it has worldwide patented, including Euro, U.S.A., U.K., Italy, Germany, China, Taiwan, Greece, Turkey, India, Japan, Thailand, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Korea……etc., hold more than 200 pieces patents. This machine also earned Distinguished Enterprise Innovation Award and Taiwan Excellence Award from Taiwan Ministry of Economic Affairs in recognition of its outstanding performance and dedication to industrial innovation.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည်ဖြူနဲ့ Hard အမှုသည်ငါတို့၏၏အရည်အသွေးနှင့်ကိုက်ညီဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့
နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူ။ ထုတ်လုပ်ခြင်းတောင်းဆိုချက်များကိုအမျိုးမျိုးအမျိုးမျိုးအဆိုအရ, ငါတို့သည်သင်တို့မှပြီးပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုကိုပူဇော်ရမည်။
Textile Dyeing Machine	| Machine De Teinture Textile	| Textilfärbemaschine	| Текстильная Красильная Машина	| Máquina De Tingimento Têxtil	| Macchina Per La Tintura Di Tessuti	| कपड़ा रंगाई मशीन	| Maquinas De Teñido Textil	| Textielverfmachine	| آلة صباغة المنسوجات	| Máy Nhuộm Dệt	| เครื่องย้อมสีสิ่งทอ	| Mesin Pencelupan Tekstil	| টেক্সটাইল ডাইং মেশিন	| Kumaş Boyama Makinesi	| 染布机